ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမယ် – Mobile Articles
4 days ago Chan Maye Aung
ရည်မှန်းချက်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ ထားရမယ့် စိတ်နေသဘောထားလေးတစ်ခုတော့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
သင်ဟာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင် အဲ့ရည်မှန်းချက်ကြောင့်
သင်အနေဆင်းရဲ၊ အစားဆင်းရဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သူများတွေ ဝတ်စားသလို ဝတ်စားချင်မှ ဝတ်စားနိုင်မယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဒဏ်ကို ခံမယ်၊ အဲဒီ ဒုက္ခတွေကို ရအောင်ကျော်ဖြတ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး သင့်မှာရှိရပါမယ်။
သင့်သူငယ်ချင်းတွေက အခြားပညာရပ်တစ်ခုနဲ့ အောင်မြင်နေချိန်မှာ သင့်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာမယ့် “ငါ့ ဝါသနာကြီးက မှားများမှားနေပြီလား?
ငါ လမ်းမှားရောက်နေပြီလား? ငါ လေ့လာလိုက်စားနေတဲ့ ပညာရပ်က သူတို့ လေ့လာနေတဲ့ ပညာလောက်ရော အသုံးဝင်ရဲ့လား? ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေကို “ငါဘာလို့ မအောင်မြင်ရမှာလဲ?
ငါလေ့လာနေတဲ့ ပညာရပ်တွေက သူတို့ ထက်ခက်လို့နေမှာပေါ့၊ ငါ့ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါဘာတွေထပ်လေ့လာရဦးမလဲ? အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ?” ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေနဲ့ အစားထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတွေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာကလဲ သင်တကယ်ဝါသနာပါတဲ့ ပညာရပ်နယ်ပယ်ကို ရည်မှန်းချက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မိမိရည်မှန်းချက်ကို ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်လဲ အလွယ်တကူ လက်မလျှော့ သင့်ပါဘူး။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။
လူတိုင်းကတော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပိုကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ပညာရပ်မဆို အခက်အခဲကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အလွယ်တကူ အလျှော့မပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဝီရိယဆိုတဲ့ အရာကို ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ လက်လွှတ်အဆုံးရှုံးမခံတဲ့ သတ္တိ လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်အားလုံးမှာ ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ တစ်နေ့ကျရင် ဘာဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အသက်ကြီးလာလေလေ ရည်ရွယ်ချက်တွေများပြားရှုပ်ထွေးလာလေဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တော်တော်များများဟာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ပါဆိုရင် ငွေအမြောက်အများ ရနိုင်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုကို ပဲ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ထားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တမ်း ဝါသနာပါတာလားဆိုတော့လဲ မပါပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ဒီကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်ပညာရပ်မဆို အသုံးမဝင်တာမရှိပါဘူး။
သင်ဟာ ပညာရပ်တစ်ခုကို စီပွားရေးအတွက်ပဲ ရွေးချယ်ချင်တာလား၊ ကိုယ်တကယ်ဝါသနာပါတဲ့ ပညာရပ်ကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်တာလား ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးဖို့လိုပါတယ်။
လူငယ်တော်တော်များများမှာ လူမှန်းသိတတ်စ အရွယ်တည်းက ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။
အချို့လူငယ်လေးတွေက ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်၊ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တယ် စသဖြင့်ပေါ။
ဒါပေမဲ့လဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မိမိပန်းတိုင်တွေနဲ့ လွဲခဲရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းမှာ အစားထိုးပန်းတိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်။
ဆရာအောင်သင်းပြောသလိုပါပဲ “မင်းဟာအသံမကောင်းလို့ အဆိုတော်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အကောင်းဆုံးတေးရေးဆရာတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်အရမ်းဖြစ်ချင်တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ
ဆယ်တန်းမှာ အမှတ်မမှီခဲ့ရင်တောင် သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လူ့အသက်ကို ကယ်ဖို့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခန္ဓာဗေဒနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်ကို ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် သူနာပြုတက္ကသိုလ်ကို ဖြစ်ဖြစ် လျှောက်ထားပြီး ပညာရှင်ဖြစ်သည်အထိ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုအတိအကျချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဒီရည်မှန်းချက်နဲ့ ပတ်သက်တာကိုပဲ အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မုန့် ဆိုင်တွေမှာ မုန့် တွေအများကြီးတင်ထားသလိုပါပဲ။
စားသုံးသူဟာ မုန့် တွေများကြီးတွေ့ တဲ့ အခါ ဟိုဟာလဲစားချင် သည်ဟာလဲစားချင်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဘယ်ဟာမှ မစားနိုင်တော့သလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် များများသိတာ အချို့ နေရာတွေမှာကောင်းသလို အချို့ နေရာတွေမှာလဲ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။
သင်ဟာ သင့်ရည်မှန်းချက်ကို ယခုလောလောဆယ်ရှာမတွေ့ သေးဘူးဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်နောက်ပိုင်းလေ့လာမယ့် ဘယ်ဘာသာရပ်မဆို အင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သင့်အတွက် အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ သင့်မှာ ယခု တက္ကသိုလ်လည်းတက်နေတယ် ရည်ရွယ်ချက်လဲမရှိဖြစ်နေတယ်ဆိုလျှင် ရှေးဦးစွာ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သင် သင်ယူနေရတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်လေ့လာကြည့်ပါ။
သင့်ဘာသာရပ် အကြောင်းကို လေ့လာလေလေ ဒီဘာသာရပ်အကြာင်းကို ပိုသိလာလေလေ။ ဒီဘာသာရပ်အကြောင်းကို သင်သိလာလေလေ ဒီဘာသာရပ်ကို တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားလာလေလေ။
ဒီ ဘာသာရပ်ကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာလေလေ ပိုလေ့လာဖြစ်လေလေ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သင်ဟာ ဒီဘာသာရပ်မှာ အတော်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အချို့ လူငယ်တွေက အချိန်လွန်မှ မိမိတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ မိလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒီအတွက် သူုတို့ မှာ ယူကျုံးမရဖြစ်ပြီး အဲဒီ့ရည်ရွယ်ချက်ကို စွန့် လွှတ်လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းပါတယ်။
မိမိတကယ်စိတ်မပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေမယ့်အစား တကယ်စိတ်ပါတဲ့အရာကိုလုပ်ရတာက ဘ၀ကိုပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသွားစေပါတယ်။
မိမိဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ ရင်တောင် စစ်မှန်တဲ့ အပျော်ကိုရရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဘယ်အရာမဆိုနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မှာတော့အခြားသူတွေထက် ပိုမိုအားစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အခြားသူတွေက ဒီပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန် တစ်နာရီပေးတဲ့ အချိန်မှာ သင်က သုံးနာရီ၊ လေးနာရီလောက်တော့အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ လူတော်တော်များများက ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာတောင် အဖော်မင်တတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ မိမိ ဘာသာရယ်နယ်ပယ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းသွား တက်ဖို့ ကို သူငယ်ချင်းမပါလို့ သွားမတက်ဖြစ်တာမျိုးတို့ ၊ မိမိနဲ့ အတူလေ့လာမယ့် သူငယ်ချင်းမရှိတာမျိုးတို့ ကြောင့် မလုပ်ဖြစ်၊ မလေ့လာဖြစ်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားစရာအချက်အလက်တွေက နိုင်ငံရပ်ခြားက ပညာရှင် အဖွဲ့ အစည်းတွေကရော လူညီနေတာလား။
သူတို့ က ၀ါသနာတူသူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ ငယ်ငယ်ကတည်းကရွေးပေါင်းတာလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ထက်အားသာတဲ့အချက်က သူတို့ က သူတို့ ရည်မှန်းချက်ကို ပထမဦးစားပေးပြီးမှ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကို ဆက်လုပ်တာပါ။ သူတို့ အားလုံးဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ လေ့လာတဲ့သူတွေပါပဲ။
ဒီပညာရပ်ကိုလေ့လာရင်းလေ့လာရင်းနဲ့ဝါသနာတူတွေ တစ်နေရာမှာ စုမိတဲ့ အခါ အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။
ပုံမှန်ဒီပညာရပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဟောပြောပွဲတွေသွားတာ၊ သင်တန်းတွေတက်တာ၊ ပြပွဲတွေသွားတာ စသဖြင့်ပါပဲ။
သူတို့ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့ ကွာခြားသွားတာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။
သူတို့ က တစ်နေ့ ကို ဒီပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန် တစ်နာရီလေ့လာမယ်ဆိုရင် နေ့ စဉ်တစ်နာရီရအောင်လေ့လာပါတယ်။
သူတို့ လဲ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာရာကနေ ကျွမ်းကျင်လာသူတွေရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာ ဘွဲ့ ရတွေများနေတာပါ။
နိုင်ငံခြားမှာက အထက်တန်းကျောင်းအောင်ရုံလောက်နဲ့ကျောင်းပြီးသွားကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အရည်အချင်းကို အထင်သေးလို့ မရပါဘူး။
အဓိကမြန်မာတွေပြုပြင်ရမယ့်အချက်က ‘စိတ်ကူးပေါက်မှ ထလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်’ ပါ။ သင်ဟာ သင်တစ်ကယ်ဝါသနာပါလို့ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဒီပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်နေ့ ကို အနည်းဆုံး နာရီဝက်၊ တစ်နာရီ လောက်တော့ အချိန်ပေးလေ့လာသင့်ပါတယ်။
အဓိကက စာဖတ်ဖို့ ပါပဲ။ စာအုပ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ သိချင်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အတိတ်ဘ၀က ကုသိုလ်ကံကို ကျွန်တော်တို့ ဘာမှပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်ပေမယ့် အနာဂတ်ကိုတော့ မိမိဘာသာဖန်တီးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ကံဆိုတာအလုပ်ပါပဲ။ ကိုယ်အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်မှရမှာပါ။
အဲဒီတော့ သင်ဟာ တိကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခု ချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင် အဲ့ ဒီရည်မှန်းချက်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့အောင် သင်မြင်သာတဲ့နေရာမှာ သတိပေးစာတိုလေးတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းထားရှိပါ။
ဥပမာ- သင့်ရဲ့စာကြည့်စားပွဲမှာ ကပ်ထားတာတို့သင့်ရဲ့ဖုန်း ဝေါလ်ပေပါ(Wallpaper) မှာ တင်ထားတာတို့အဲ့ဒီလို အမြဲသတိ တရဖြစ်နေစေဖို့ လုပ်ပေးပါ။
နေ့ စဉ် မနက်တိုင်း သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကို အကြိမ်ရေများများ ရွတ်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ မသိစိတ်မှာ စွဲသွားပြီး သင့်ကို တွန်းအားအမြဲပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့တစ်နှစ်စာ၊ တစ်လစာ၊ တစ်ပတ်စာ၊ တစ်ရက်စာ အစီအစဉ်တွေကို ချရေးပြီး နေ့ စဉ်ကိုယ်ဘယ်လောက်ပြီးမြောက်အောင် လုပ်လိုက်နိုင်လဲဆိုတာ ပြန်ပြီးစစ်ဆေးပါ။
ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာ သင့်ပန်းတိုင်နဲ့ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီး နောက်ဆုံး မှာပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲပြီးရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်ပါ။
လောကမှာ မိမိကိုယ်ကို အထင်သေးတာဟာ ဘာနဲ့ မှကုစားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အစီအစဉ်တစ်ခု ချမှတ်ပြီးသွားရင် အတတ်နိုင်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်ပါ။ အကြွေးမတင်ပါစေနဲ့ ။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို အမြန်ရောက်ဖို့ ထက် အရည် အချင်းပြည့်မှီစွာရောက်ဖို့ ကို အာရုံစိုက်ပေးပါ။ စာဖတ်သူများလဲ ဘ၀ရဲ့ ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေခဗျာ။
Previous ရံဖန်ရံခါ အရှုံးပေးခြင်းဟာ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါ
Next ကျောင်းသူလေးပြောတဲ့ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် (၇) ပါး